Oppo Find X3 ugbua nwere akara ngosi nke gọọmentị Gam akporosis
The Oppo Find X3 enweela ụbọchị mmeghe: a na-agbapụta akwụkwọ mmado nkwado
Oppo bụ ihe dị ka ẹkedori onye nọchiri nke Choo X2, Akara nke ika ahụ site na afọ gara aga nke malitere na March. Ọgbọ na-esote nke ga-aga nke ọma bụ Find X3, dị ka atụ anya ya, ma nweelarị ụbọchị mbupute ọrụ.
Ihe ikpeazụ anyị maara banyere ngwaọrụ a ugbu a bụ ekele maka akwụkwọ mmado nke agbapụtara na Weibo, Nke a na-egosi nke ahụ A ga-egosipụta ma gosipụta ekwentị dị elu na ahịa na March 11 a na-abịa, nke yiri ka ọ bụ ihe a na-ekwenye ekwenye, ebe ọ bụ na nke a bụ otu esi emezu kwa afọ ịhapụ usoro. Ya mere, ihe na-erughị izu abụọ anyị ga-amata ya nke ọma.
Na March 11 a ga - ewepụta Oppo Find X3: gịnị ka anyị ga - atụ anya na ngwaọrụ a?
Dị ka anyị kwuru, ọhụrụ Oppo Find X3 ga - abụ ekwentị dị elu. Ka ọ na-ede nke a, smartphone dị naanị ụbọchị 11 ka ekpughere ya nke ọma. A na-atụ anya ịbịakọta ọnụ na Pro dị iche iche, nke ga-abụ, n'ụzọ ezi uche dị na ya, kachasị elu. Agbanyeghị, nke a apụtaghị na ọkọlọtọ Oppo Find X3 ga - abụ ekwentị mkpirisi; dị nnọọ iche. N'agbanyeghị nke ahụ, a na-atụ anya na ọ gaghị abata na Snapdragon 888 n'okpuru mkpuchi.
Ma ọ ga-abụ Qualcomm Snapdragon 870 na SoC nke ga-adị ndụ na ekwentị, hotara na mbụ Snapdragon 888 bụ igwe eji agagharị agagharị nke ga-enye Oppo Find X3 Pro ikike na ume nye ụbọchị ahụ. Akwadoro nke a site na akụkọ dị iche iche na nkwụsị nke sitere na ọnwa ndị na-adịbeghị anya site na nchapu na ịkọ nkọ.
Ma Find X3 na Find X3 Pro agbaala TENAA na 3C gbaara, ụlọ ọrụ na-achịkwa iwu nke China abụọ na-achọ ịnabata ngwaọrụ tupu ha ere ahịa na China. Okwesiri ighota na a gha egosiputa igwe okwu a n’ebe ahu, n’obodo ha si. Ya mere, China ga-abụ ebe mbụ ha ga-anọ maka ịzụta, n'ezie site na oge mbụ ewepụtara ha n'ikpeazụ.
Ndị mmadụ na-ekwu otú ahụ ekwentị abụọ nwere igwe teknụzụ OLED nke ruru sentimita 6.7, yabụ na ha ga-enwe oke nha anya. Nke a bụ mkpebi QHD + nke pikselụ 1,440 x 3,216. N'aka nke ya, a na-atụ anya ka ụdị pro iji kwado omimi omimi nke 10-bit na ọnụọgụ ume mgbanwe nke 10 Hz ruo 120 Hz, ihe ga-atọ ụtọ ịhụ etu o si arụ ọrụ.
N'aka nke ọzọ, Chọta X3 Pro, dịka asambodo ọ rụpụtara, ụlọ batrị nwere ike 4,500 mAh nke na-akwado SuperVOOC 65 W teknụzụ na-ebu ibu ngwa ngwa na ikuku ikuku AirVOOC 30 W.
Banyere sistemụ foto nke usoro kachasị dị elu, amagoro ya na Mbido igwefoto azụ gụnyere ihe mmetụta quad dị ka oghere megapixel Sony IMX766 50, ihe ngosi 766-megapixel Sony IMX50 nke nwere mbara igwe buru ibu na oghere telephoto 13-megapixel nwere mbugharị ngwa anya 2x, gbakwunye igwefoto nnukwu megapixel 3. The n'ihu shutter maka selfie foto na ndị ọzọ ka amabeghị; ikekwe nke a bụ n'ime oghere dị na ihuenyo ahụ, dịka o mere na Oppo Find X2.
Nke a bụ otú ekwentị ga-esi
N'ihe banyere ebe nchekwa, ebe ọ bụ na anyị na-emeso njedebe abụọ dị elu, anyị anaghị atụ anya na RAM ga-erughị 8 GB, ma ọ dịkarịrị ala na ohere nchekwa dị n'ime ihe na-erughị 128 GB. N'iburu nke ahụ n'uche, anyị ga-ahụ otu ụlọ ọrụ ahụ si enye ọtụtụ nsụgharị ihe ruru 12 GB nke RAM na 256 GB nke ROM.
Dịka nyocha ngwa ngwa, Find X2 bụ ekwentị na-abịa na 6.7-inch AMOLED panel na mkpebi QHD +, Qualcomm's Snapdragon 865 chipset, 8/12 GB Ram, na 128/256 GB n'ime ebe nchekwa. O nwekwara batrị 4.200 mAh nke nwere ikikere 65 W, 48 + 13 + 12 MP quad Camera na 32 MP selfie sensor.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » The Oppo Find X3 enweela ụbọchị mmeghe: a na-agbapụta akwụkwọ mmado nkwado
Etu esi amata kọntaktị WhatsApp dị na Telegram
Otu esi enweta folda Google Drive ngwa ngwa na gam akporo